Shiinaha hawada qallalan budada dhoobada dhoobada ee iibinta Warshadaha iyo Warshadda | Xinzheng
Dhoobadu waa carro dheg leh oo leh ciid yar, waxayna leedahay caag wanaagsan marka biyuhu aysan si sahlan u dhex mari karin.
Dhoobada caadiga ah waxaa sameeya cimilada macdanta silicate ee dhulka dushiisa. Guud ahaan, waxay ku sugan tahay cimilada. Qurubyadu way ka weyn yihiin oo halabuurku wuxuu u dhow yahay dhagaxii asalka ahaa, kaas oo la yiraahdo dhoobada koowaad ama dhoobada koowaad. Waxyaabaha ugu waaweyn ee dhoobada noocan ahi waa silica iyo alumina, kuwaas oo midabkoodu cad yahay oo diidaya, waana alaabta ceeriin ee ugu muhiimsan diyaarinta dhoobada dhoobada.
Dhoobada waxaa guud ahaan lagu sameeyaa cimilada macdanta aluminosilicate ee dhulka dushiisa. Laakiin diagenesis -ka qaarkood ayaa waliba soo saari kara dhoobada. Muuqaalka dhoobada inta lagu guda jiro habraacyadan waxaa loo adeegsan karaa tilmaame horumarka diagenesis.
Dhoobadu waa macdan cayriin oo macdan ah. Waxay ka kooban tahay silicates kala duwan oo biyo ah iyo qaddar go'an oo alumina ah, oxides biraha alkali ah iyo oxides biraha dhulka alkaline, waxaana ku jira wasakh sida quartz, feldspar, mica, sulfate, sulfide, iyo carbonate.
Macdanta dhoobadu waa yar tahay, badanaana waxay ku jirtaa baaxadda cabbirka colloidal, oo ku jirta qaab kristaliin ah ama aan kristaliin ahayn, oo badankoodu u qaab-eg jajab, qaarna waa tuubbo ama qaab ulaha.
Macdanta dhoobadu waa caag ka dib markii lagu qooyay biyo, waxaa lagu beddeli karaa cadaadis hoose waxayna sii jiri kartaa muddo dheer, waxayna lahaan kartaa dhul ballaadhan oo gaar ah. Qurubyada ayaa si xun loo soo oogay, sidaa darteed waxay leeyihiin xayeysiin jireed oo wanaagsan iyo wax -qabad kiimiko oo dusha sare leh, waxayna la jaan qaadayaan tilmaamaha kale. Awoodda wax isdhaafsiga.
Marka loo eego dabeecadda iyo adeegsiga, waxaa loo qaybin karaa dhoobada dhoobada, dhoobada dib -u -celisa, dhoobada lebenka ah iyo dhoobada sibidhka. Dhoobo adag ayaa badanaaba ku jirta qaab -dhismeedyo ama looxyo. Guud ahaan laguma quusin biyaha waxayna leedahay leexasho sare. Waa alaabta ceeriin ee ugu weyn ee badeecooyinka cilladaysan. Dhoobada adag ee dhoobada wax -u -dhiska ah waxaa loo adeegsadaa in lagu sameeyo wax -ka -beddelka foornada qarxa, lebenka dahaarka ah iyo lebenka daboolka ah ee foornooyinka dhalaaliya birta, shooladda qarxa kulul, iyo durbaannada birta. Warshadaha dhoobada, dhoobada adag iyo dhoobada nus-adag ayaa loo isticmaali karaa alaab ceeriin ah oo loogu talagalay soo saarista dhoobada maalinlaha ah, dhoobada dhismaha iyo dhoobada warshadaha.
Hore: Budada dhoobada Bentonite ee timaha / wejiga / ilkaha
Xiga: 8-16mm ceramicite dhoobada dhirta